Le nkampani ibambe umcimbi wokuvulwa kokuqeqeshwa kwabasebenzi abasha ngo-2021
Ntambama yango-Agasti 20, 2021, inkampani yabamba umcimbi omusha wokuvula ukuqeqeshwa kwabasebenzi egumbini lenkomfa le-312. Umhlangano wenganyelwe nguFang Jiaqin, iMenenja Jikelele uLi Dong, uQi Jifei, amaPhini Abaphathi-Jikelele, izinhloko zeminyango eyahlukene, abasebenzi abasha...
Isihluthulelo sokuxazulula imisindo emikhulu eyisikhombisa ngaphakathi kwesekhethi(7)
7. Umsindo wesifunda esihlanganisiwe Kunezinhlobo ezimbili zokuphazanyiswa komsindo kumasekethe ahlanganisiwe: eyodwa i-radiated kanti enye i-conductive. Lezi zinyuka zomsindo zingaba nomthelela omkhulu kwezinye izisetshenziswa zikagesi ezixhunywe kugridi ye-AC efanayo. I-spectrum yomsindo inwetshwa ibe ngaphezu kwe-1...
Isihluthulelo sokuxazulula imisindo emikhulu eyisikhombisa ngaphakathi kwesekhethi(6)
6. Umsindo we-resistor Ukumelana ne-resistor kuvela ku-inductance ku-resistor, umphumela we-capacitive, nomsindo oshisayo we-resistor ngokwayo. Isibonelo, i-rolid core resistor enevelu yokumelana engu-R ingalingana nochungechunge oluhambisanayo noxhumano lwe-resistor...
Isihluthulelo sokuxazulula imisindo eyisikhombisa emikhulu ngaphakathi kwesekhethi(5)
5. Umsindo we-Transistor Umsindo we-transistor ikakhulukazi uhlanganisa umsindo oshisayo, umsindo odutshulwayo, nomsindo ocwebezelayo. Umsindo oshisayo ubangelwa ukunyakaza okushisayo okungavamile kwabathwali abadlula ukumelana komzimba kwezifunda ezintathu ze-BJT kanye nokumelana nokuhola okuhambisanayo. Th...
Isihluthulelo sokuxazulula imisindo emikhulu eyisikhombisa ngaphakathi kwesekhethi(4)
4. Ukugxambukela kwezingxenye zikazibuthe ebhodini lesekethe Amabhodi amaningi esekethe anezakhi zikagesi ezifana nama-relay namakhoyili. Lapho i-current idlula, i-inductance yekhoyili namandla asabalalisiwe e-casing yangaphandle kukhipha amandla endaweni ezungezile, kanye ne-ener...
Isihluthulelo sokuxazulula imisindo emikhulu eyisikhombisa ngaphakathi kwesekhethi(3)
3. Umsindo oshisayo ovama kakhulu Umsindo oshisayo ovama kakhulu ubangelwa ukunyakaza okungahleliwe kwama-electron ngaphakathi kwekhondakta. Uma izinga lokushisa liphezulu, ukunyakaza kwe-elekthronikhi kuzoba namandla kakhulu. Ukunyakaza okungahleliwe kwama-electron ngaphakathi komqhubi kudala ama-fluctu amaningi amancane...
Isihluthulelo sokuxazulula imisindo emikhulu eyisikhombisa ngaphakathi kwesekhethi(2)
2. Umsindo oshuthwayo okhiqizwe amadivaysi e-semiconductor Inani lenkokhiso eqoqwe kulesi sifunda liyashintsha ngenxa yoshintsho kuvoltheji yesifunda esivimbelayo kuwo wonke umgwaqo we-semiconductor we-PN, ngaleyo ndlela ibonise umphumela we-capacitive. Lapho i-voltage eya phambili esetshenziswayo ikhuphuka, ama-electron aku...
Isihluthulelo sokuxazulula imisindo emikhulu eyisikhombisa ngaphakathi kwesekhethi(1)
1. Umsindo wefrikhwensi ephansi Umsindo wefrikhwensi ephansi ubangelwa ikakhulukazi ukungaqhubeki kwezinhlayiya zangaphakathi ze-conductive. Ikakhulukazi, i-carbon film resistor inezinhlayiya eziningi ezincane ngaphakathi kwe-carbonaceous material, futhi izinhlayiya aziqhubeki. Lapho i-current igeleza, ugesi ...
Isihluthulelo sokuxazulula imisindo emikhulu eyisikhombisa ngaphakathi kwesekhethi
Idizayini yesiyingi iyisici esibalulekile ekusebenzeni okuphezulu kwenzwa. Njengoba ukukhishwa kwenzwa kuyisignali encane kakhulu, uma isignali ewusizo igcwele umsindo, ngeke ifanele ukulahlekelwa, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuqinisa umklamo wokulwa ne-jamming wesifunda senzwa. ...
Izici zenqubomgomo: kuzokwethulwa imboni yezinzwa ezihlakaniphile zeminyaka emithathu
Ezingeni eliqhutshwa yinqubomgomo, u-GuoYuansheng wethule ukuthi "Uhlelo Lweminyaka Emihlanu Yeminyaka Emihlanu" lufake kuhlu izinzwa ezithuthukisiwe njengokugxilwa kuzo ekuthuthukisweni kwamasu. Okulandelayo, uMnyango Wezimboni Nobuchwepheshe Bolwazi “Umhlahlandlela Weminyaka Emithathu Wemboni Yezinzwa Ezihlakaniphile (2017-2019)” uzokwethulwa ngokuzayo...
Imali engenayo yonyaka yeMediaTek izodlula amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-10 okokuqala ngqa ngo-2020
USihlalo weMediaTek u-Cai Mingjie uklonyeliswe Ngendondo Yegalelo Lempumelelo Evelele Yokugubha iminyaka engu-40 kaZhuke. Enkulumeni yakhe, u-Tsai Mingjie uthe iminyaka engu-40 kwasungulwa uZhuke, lapho uZhuke ebhekane nezinselelo ezahlukene, kulo nyaka, i-semiconductor yaseChina yaseTaiwan...
Inani elikhulu lezinzwa zemoto eyisibonelo ezishayelayo ye-Apple
NgoNovemba 11, 2020, i-chip ye-Apple eyazakhela yona i-M1 yethulwa ngokusemthethweni. Le chip ye-M1 iwuphawu lokukhula kwe-Apple kusuka emkhakheni womakhalekhukhwini kuya kwezinye izindawo ngaphandle komakhalekhukhwini. Le chip ingasetshenziswa kuma-cockpits ezimoto kanye nokushayela okungenamuntu ngokuguqulwa okuncane. I-Apple ine...
I-Hall Effect Inzwa Yamanje, I-Hall Effect Ac Inzwa Yamanje, Inzwa Yamanje Ye-Ac Yokunemba Okuphezulu, Inzwa Yamanje Yehholo, Inzwa Yamanje Yokusebenzisa Amandla E-Dc, Inzwa yamanje ye-Voltage,